Ogaden News Agency (ONA) – Afghanistan oo Xabad-Joojin Lagaga Dhawaaqay.
Afghanistan oo Xabad-Joojin Lagaga Dhawaaqay.
Madaxweyne dalka Afqaanistan, Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay xabad joojin socon doonta mudo sadex bilood ah.
Taalibaan oo dagaal xooggan kula jirta dowlada Afghanistan ayaan ilaa hada wax war ah kasoo saarin in ay hirgelin doonaan xabadjoojinta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ashraf iyo in ay ka hor imaan doonaan maadama aamusnaanta kooxdan ay tahay mida shakiga laga muujinayo.
Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa talaabadan xabadjoojinta ah u qaaday si loo nabadeeyo goobaha ay ku dagaalamyaan mucaaradka iyo dowlada dalka Afghanistan kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex marayay magaalada Ghazni iyo deegaano kale oo dalkaaasi kamid ah.
Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Janaraal Jens Stoltenberg ayaa soo dhaweeyay xabbad joojinta uu soo bandhigay Mr Ghani, isagoon muujiyay in ay tahay mid bad baado u ah shacabka, sidoo kalena Mr Stoltenberg wuxuu ugu baqay kooxda Taliban in ay xushmeeyaan xabbad joojinta uu iclaamiyay madaxweynaha wadankaasi Ashraf Ghani.
Magaalada Ghazni iyo meela kale oo dalkaasi ka mid ah ayaa maalmihii dhawaaba waxaa dagaal xoogan uu ku dhex marayay xoogaga Taalibaan iyo ciidamada Dowladda kuwaasoo taageero ka hela gaashaan buurta NATO.